BochumWeebụKachasịMma na 2020（Dabere na Real Data＆ỌnọdụOjiji）
N’ihi naweebụsaịtịdịiche iche nwere mkpadịiche iche-Kedu ihekachasịm mma nwere ikeọgaghịadịmma makagị。 Peeji mmeghe nke 5-20 kacha enyendịịbịaweebụnwere ikeịbauru makandịna-achịkọtandepụtaịzụahịa; ezigbondịahịachọrọịzụtaASAP Webホストga-achọnkọwandịọzọ.
site ogologondepụtanke nnabataanyị、Ahọpụtawom 10ụlọọrụweebụkachasịmma：
Anyịga-enyocha ha n’otu n’otu wee tuleeụzọha sidịiche na ibe a.
1 10社lọọrụBochumkachasịmma nke Web：長所と短所 & 評決
1.1 1. EnweMmasị
1.4 7. TMDボーフム
1.6 9. WP Webホスト
2 Jiri Ozo nkeNhọrọM Bochum kacha Mma
2.1 1.Kachasịmma makaHostingdịBochumDịIche
2.1.2 VPS /クラウドホスティング
2.2 3. BochumWeebụkachaọsọ/arụmọrụkacha ngwa
2.3 4. BochumWeebụkacha mma makaNdịMmepe
2.3.1 NDMỌD::Chọrọgburugburu mmepepụrụiche na Bochumòkè?
2.4 5. Nkekachasịmma makaazụmaahịaobere
2.5 8. NmaliteNdịỌrụNlekọta-Enyi
2.5.1 BochumWeebụsaịtịkachasịmma nkeonwe：GreenGeeks、Hostinger、TMD Bochum Dịkaọbịamakandịedemede、nnabatawebsaịtịnkeonwekwesịrịịbụnkedịọnụala madịkwamfe iji。 N’agbanyeghịmaọbụibipụtaCVgịmaọbụkwalite “njirimara nke akagị”-Onye na-ewusaịtịdịmfe、njirimara webmail wuru naọnụahịadịọnụalabụihekachasịmkpa na onye na. Makandịna-eletanaanịotuweebụsaịtị、Hostinger na-enye ihekachasịdịọnụala（$ 0.80 / mo na ndebanye aha）。 Bochum TMD na GreenGeeks na-enye ihedịụnụma ha nwere ebenrụọrụweebụna-akparaghịókèma na-enye nkwadondịahịadịmma. Bochumkachasịmma makaNdịỌrụUK：Kinsta、SiteGround Ijighọtaihe na-eme onye web webkasịmma maka otuọnọdụ、ọdịanyịmkpaịtụleNkwụsị. Kedu ihenkwụsị?
2.5.3 Yabụkedu web host kacha mma makaweebụsaịtịUK?
2.6 12. Nkekachasịmma makaWebụsaịtịマレーシア & シンガポール
10社lọọrụBochumkachasịmma nke Web：長所と短所 & 評決
2001lọọrụnchịkwadabeere na LA nke edobere na 2001. Nwee ma jikwaa Web Bochum Hub.
ムウェプタ：$ 3.99 /月
イケ：$ 5.99 /月
クワ：$ 13.99 /月
Ọnụahịaahịana-abawanye mgbe mbidombụ.
Ejiri Sunil Saxena na Todd Robinson na 2001 guzobere Bochum nkeMmasị。 Ụlọọrụahụna-enweọfịsatọnaロサンゼルス、バージニアビーチ、バージニア州デンバーCO、yana ebe datadịnaロサンゼルス、カリフォルニア州、バージニア州アシュバーン.
Ha nwekwara ma jikwaa Web Bochum Hub na ugbu a na-eji ihekarịrị300ọrụna haụlọọrụ.
InMotion Bochum bu ihe web nke m n’otu n’otu n’otu n’otu Onyenwereochie na-akwado na InMotion VPS ma enwere m obianụrịmakaarụmọrụha.
InMotion Bochumanọwona egwuregwu Bochum ihefọrọnke nta kaọbụrụafọ20-ndekọogologoazụmahịahagosipụtarana habụotu n’imendịna-eweta Bochumkachasịmman’ahịa.
Ihe ole na ole na-eme InMotion Bochumna-apụtabụsava ejiri ha（nke​​ na-enweta mgbe niile> 99.98％の稼働率）na ezigbondịnkwado ha Ọbụrụnaịnwere nsogbuọbụlamaọbụajụjụ、nkwadondịahịahana-adịngwa ngwaịzaghachi.
Companylọrụahụna-enyeatụmatụnnabataatọdịoke mma maka nnukwuweebụsaịtịyana VPS na Bochum raara onwe ya nye makasaịtịburu ibu.
Gụọnyocha m nke InMotion Bochum zuru oke ebe a
Viruslọna njemepụtarana nyochaマルウェア.
Gbalịaịchọtanaanị$ 0.01ọnwambụ（koodu dere：WHSRPENNY）
InterservernwekọrịtaBochumdịmma maka makandịna-edeblọgụna obereazụmahịa。 Makaụlọọrụburu ibu na ebenrụọrụweebụnwere okporoụzọdịarọ-savandịọrụVPS na NJ ha na-enye ezigbo mgbanwe.
Ntọalana 2004 site na otundịenyi na mahadum。 Ụlọọrụnaブルガリア、イタリア、スペイン、イギリス、naアメリカ合衆国.
ママリット：$ 3.95 /月
成長する：$ 5.95 /月
GoGeek：$ 11.95 /月
Keyatụmatụ：ClọọrụCMS wuru n’ime、ozi email、HTTP / 2 nyeere、Ka Encrypt Wildcard SSL.
E hiwere SiteGround na 2004 site na otundịenyi na mahadum na Sofia、Bulgaria Taa、ụlọọrụahụbụTenko Nikolov、Reneta Tsankova、na Nikolay Todorov.
Ụlọọrụahụemeela kandịọrụ400 jiriọrụndịdịnaブルガリア、Ịtali、スペイン、イギリス、naアメリカ合衆国mee ihe。 Ha nwere 6 isi data datadịnaアメリカ合衆国、オランダ、イギリス、シンガポール.
Ụlọọrụndịọzọsiri ike、SiteGroundbụotu n’imeụlọọrụole na olena-agbalịsiikeịnyeọrụụlọọrụapụrụịdaberena ya site naatụmatụndịọhụrụ.
Otu ihedịotúahụbụSuper Cacher、nkebụngwáọrụna-arụọrụnke nwere ike ime ka ebenrụọrụweebụrụọngwa ngwa。 NjirimaraọzọbụikikeịwụnyeKa Encrypt SSL jirinanịntinye ole na ole、na-eme kaọdịmfe makandịọrụijihụna ebenrụọrụweebụhadị.
Ọbụezie naịkwụụgwọmakaịmegharịọhụụnwere ikeịtụleobere mgbago、ọbara uruọfụmamaka ogo mbandịịna-enweta na nloghachi。 Echere m na SiteGround dabara adaba makandịọchụntaego nandịna-edeblọgụọkachamarana-achọngwọtannwere onwena-enweghịnsogbu.
Nrụrụọrụsava siri ike-gosiri A n’ime ule niile.
Enyi gburugburu ebe obibi-300％Bochum kore（nke kacha elu nkeụlọọrụ）.
Framework Genesis na StudioPressna-akwụghịụgwọ.
Ntinye na nkwalite SSLọhụrụnaakpaghịaka.
Mbugharịsaịtịefu n’efu + onye na-ewuụlọdịmfe iji.
Ndịọrụọbụlana-achọihengwọta環境に優しいホスト、初心者、onye na-edeblọgụ、ndịọchụntaego pere mpe、ndịụrụmmefu ego、ndịọrụna-anaghịakwụụgwọ.
Guzosie ike 2004、HostingerbụụlọọrụBochum mmefu ego na-agbaọsọn’ọtụtụebe datan’ụwaniile.
エケラタナン：$ 0.99 /月
AkaụntụEkekọrịta：$ 2.89 /月
イケラタアフア：$ 3.99 /月
主要なAtụmatụ：無料のngalaba、初心者、enyi na enyi nasaịtịna-ewuụlọ、ọnụala .xyz ngalaba、dịalaọnụòkèBochumatụmatụ.
Nkwado nkeọmana ntinye ntinye makaAtụmatụEkekọrịtaNaanị.
Ugbu a onyeisiụlọọrụArnas Stuopelisna-achịkwaya、e guzobere Hostinger na 2004dịkaụlọọrụ "ボーフムメディア" nkeブートストラップna Kaunas、リトアニア。 Afọole na ole mgbe nkeahụgasịrị、ha malitekwara 000Webhost、ọrụntanetịimeweebụn’enweghịmgbasa ozi.
N’agbanyeghịnaọbụụlọọrụna-emefu ego、Hostinger nwere 8つのデータセンターdịn’akụkụụwanile naシンガポールbụihe mgbakwunyeọhụrụha。 a na-edekwa ha na mba 39 mabụrụonye na-edeba aha na ICANN zuru oke.
Kemgbe ha malitere、Hostingeraghọwoụlọọrụụlọọrụa maara nkeọmana-akwado 29 ndendịọrụna nkezi 20,000ọhụrụọrụntinye aka kwaụbọchịna 2017.
Isi ihe ga-eme ka ha nweeọganihu？ Inyeụdanke njirimara njirimara na obereọnụahịa（otu n’imendịdịọnụala naahịa、lee okpokoro）makandịọrụya.
Hostingerkwesịrịịlelemaọbụrụnaịchọrọọtụtụnjirimaraatụmatụdịkao kwere n’ekwesighiịfụfuegogị.
オゲọb egla egoazụnkwa.
Nhọrọnke ebe nchekwa na ebeanọ.
初心者、ndịna-edeblọgụ、ndịobereụlọahịanandịna-azụahịa、ndịọrụmmefu ego、ndịnweere onwe ha、ndịna-anaghịakwụụgwọ、ndịna-ahụdịọrọdọeọrọmọaụ ọrụeCommerce、ụlọahịan’ịntanetị、na nnukwu ebenrụọrụweebụ.
Tọrọntọalana 2007、TMD Bochum kpuchitere usoroịgwọBochum niile：Shared、Reseller、VPS Cloud、WordPress Managed、na Raara Onwe.
AtụmatụAtụmatụ：$ 2.95 /月
Atụmatụazụmahịa：$ 4.95 /月
ニェヌ・アヒア：$ 7.95 /月
Keyatụmatụ：Ngalaba ana-akwụghịụgwọ、Weeblydịnjikere、ikpe60-ụbọchịn’efu、NGINX、KaanyịEncrypt WildCard SSL、koodunkwụghachiụgwọpọrụiche“ WHSR7”.
Ọnụahịammeghari ego bara uru.
Bochum TMDanọwoihekarịrị10afọma ewere yadịkanhọrọapụrụịdaberena ya makandịchọrọmkpa nnabata nnabata webusaiti.
Site na ebe dataanọna-agbasa na United States na ebe dataesenidụtna Amsterdam、a-enye TMD Bochum ntinye na PC Editor’s Choice.
Bochum TMD na-enyeatụmatụBochumdịiche iche、gụnyerenkekọrịta、reseller、VPS、igwe ojii、njikwa WordPress、naọrụBochum raara onwe ya nye.
TMDHostingezughịoke mana ana m akwado TMD Bochum makandịna-edeblọgụmaọbụobereazụmaahịana-aba etitina-achọngwọtaweebụBochumpụrụịdabereỌbụghịnaanịaava na hauru k na ha na ha kava na ha do a ha na ava ava ha ha ha na ha ava a ha na ava ava ha mana ha nwekwaraụfọdụndịotu nkwadoahịakachasịmma naụlọọrụ.
Ọbụrụnaịna-atụleatụmatụAmaliteIjekọ、Mga-atụaro ka ga gaa makaỤlọAhịaAtụmatụdịkaụgwọdịogologo ogebụiheọzọmaọbụkarịa（$ 8.95 / mo vs $ 9.95 / mo vs $ 9.95） -enwe ezigbo mmaarụụrụnkesa na ikike.
Nhọrọnke ihe nkesa 15 gburugburuụwa.
Enwe mbata makandịọrụogembụ.
Ezigbo aha-ファンna-eche nche na ebe niile.
Ihe omuma nnkwado zuru oke.
OnyeMmepụta-enyina enyi na-eleba ebe na akpaaka kwaụbọchị.
Ndịmmepe WordPress、mmepe mmepe naụlọọrụmgbasa ozi、yanandịọrụWordPressdịelu.
9. WP Webホスト
Guzosie ike na 2007、nkendịnwe obodondịdaEbeỌwụwaAnyanwụEshia naụlọọrụエクサバイト.
WP Blogger：$ 3 /月
WP Lite：$ 7 /月
WPDịMkpa：$ 17 /月
WP Plus：$ 27 /月
Keyatụmatụ：Ngalaba .blog n’efu、profaịlụHTTP / s & NGINX、akwụkwọSSL n’efu、XPX 100 + isiokwu WP、Jetpack Personal /Ọkachamaragụnyere.
Ndịọrụniile nkendịExabytesdịn’akandịdaEbeỌwụwaAnyanwụEshia、WPWebHost malitere njem ha na 2007 ma na-eche iji nyendịụrụihedịmkpa nankwukọrịtankànaPresszụmakaweebụ.
Ha nwereụlọọrụdataabụọdịna Denver、Co、na Singapore iji nyeyesọọsọọsọna US maアジア太平洋.
WPWebHostbụotu n’imeụlọọrụntanetịweebụdịnaNdịdaEbeỌwụwaAnyanwụAsia na mgbe hanọnaazụmahịakemgbe 2007、hana-anọgidena-enye ego naasọmpiọnụahịan’ihia na ha.
Ọnụahịadịokéọnụahịana-eme ka WPWebHostbụrụmaka nlebara anya makandịọhụrụna-achọnchịkọtaego WordPressna-ejighịọnụma nweentakịrịego.
Otúọdị、ngwa ngwa ha na-azaọsọọsọnaọrụndịahịana-enweghịegobụihe isinchịkwankeịnwere ikeịchọrọtupuịbanye.
Gụọnyocha zuru ezu na WP Web Host
Ọrụnkesa siri ike.
Nchedo Firewall + DDoS naatụmatụniile.
HIPAA-kwekọrọna nkwalite nkesa egwuregwu.
Nnukwu ihe omuma maka enyemaka DIY.
Lọọrụmmepe naazụmaahịa、ndịọrụnnabataụlọọrụ、ebenrụọrụweebụazụmahịaburu ibu、ndịna-emepụtaegwuregwuntanetị、ntanetị、ụlọahnetan’ịn.
Jiri Ozo nkeNhọrọM Bochum kacha Mma
Ọzọ、kaanyịjiriọnọdụdịiche iche nkeụlọọrụBochum a na-ejiọkwadịelu eme ihe.
Kachasịmma makaweebụsaịtịWeebụsaịtị：A2 Bochum、InterServer、Hostinger
N’ihe banyereòkèウェブホスティング、ịna-enwekarịoke naọnụọgụgụweebụsaịtịịnwere ikeịnabatakwaakaụntụdabere naatụmatụ。 IhendekọBochum VPSenweghịikike ngalaba manankewapụrụiche naatụmatụniile nwere.
$ 3.99 /ナイフ $ 5.99 /ナイフ $ 13.99 /ナイフ
4.00ドル/ナイフ 4.00ドル/ナイフ 4.00ドル/ナイフ
$ 3.95 /ナイフ $ 5.95 /ナイフ 11.95ドル/ナイフ
$ 2.95 /ナイフ $ 5.95 /ナイフ 11.95ドル/ナイフ
0.90ドル/ナイフ $ 2.89 /ナイフ $ 3.99 /ナイフ
$ 3.92 /ナイフ $ 4.90 /ナイフ 9.31ドル/ナイフ
$ 2.95 /ナイフ $ 4.95 /ナイフ 7.95ドル/ナイフ
3.00ドル/ナイフ 17.00ドル/ナイフ 77.00ドル/ナイフ
Mara-Kinsta na LiquidWebanaghịenyeyerụmbandịọzọnwere nkewa.
CompanyNtinye nbanyeMid Level上級
17.99ドル/ナイフ $ 29.99 /ナイフ $ 49.99 /ナイフ
18.00ドル/ナイフ $ 30.00 /ナイフ $ 54.00 /ナイフ
$ 80.00 /ナイフ $ 120.00 /ナイフ $ 160.00 /ナイフ
$ 20.00 /ナイフ $ 40.00 /ナイフ $ 80.00 /ナイフ
12.95ドル/ナイフ $ 29.95 /ナイフ –
$ 25.00 /ナイフ $ 35.00 /ナイフ $ 50.00 /ナイフ
$ 29.97 /ナイフ 52.97ドル/ナイフ $ 62.97 /ナイフ
$ 400.00 /ナイフ $ 900.00 /ナイフ $ 1,500.00 /ナイフ
$ 29.00 /ナイフ $ 49.00 /ナイフ $ 69.00 /ナイフ
Mara-atụmatụatụmatụVPS（ihedịka）nkọwapụta：ọkwantinye-4 GB Ram、nchekwa 75 GB; N’etiti etiti-6 GB Ram、nchekwa 150 GB; Di elu-8 GB Ram、nchekwa 250 GB。 InterServer nwere nhazi ihe nkesa na-agbanwe agbanwedịka ha nwere / jikwaa etiti data ha ma na-enyengwọtannabata nke collocation.
3. BochumWeebụkachaọsọ/arụmọrụkacha ngwa
グローバル 〜400 ms
Atụmatụniile Atụmatụniile Atụmatụniile グローバル 〜500 ms
Atụmatụniile ターボ（nkekọrịtakọrịta）maọbụkarịa Atụmatụniile グローバル 〜500 ms
Atụmatụniile Atụmatụniile Atụmatụniile グローバル 〜200 ms
Atụmatụniile Atụmatụniile Atụmatụniile US na Eshia 〜700 ms
Atụmatụniile ナーニャナボーフムWPアチャクワ Ee eeachọrọnhazi 我ら & EU 〜450 ms
4. BochumWeebụkacha mma makaNdịMmepe
Atụmatụniile Atụmatụniile Atụmatụniile Atụmatụniile
VPS maọbụkarịa VPS maọbụkarịa VPS maọbụkarịa
VPS maọbụkarịa VPS maọbụkarịa VPS maọbụkarịa VPS maọbụkarịa
NDMỌD::Chọrọgburugburu mmepepụrụiche na Bochumòkè?
Node.js nnabata na-ebidonaanị$ 3.70 / mo na A2ボーフム.
Imirikitindịwebna-ahụmakaweebụanaghịenye ihedịukwuun’ụzọnkendịnrụpụtamakaakaụntụnnabata。 A2 Bochum na Interserverbụndịana-adịghịahụkebena-eme。 Makandịna-ele anya na VPS Bochum、a na-ahaziọtụtụgburugburu.
Pịaebe a iji gaa A2 Bochum /Pịaebe a iji gaa Interserver.
5. Nkekachasịmma makaazụmaahịaobere
かあにị動物園 KasịMma WordPress Bochum makaNdịỌrụDi elu：Kinsta、SiteGround
ワードプレス、ワードプレス、サイトワード、サイトワード、ワードワード、およびワードワードワードを使用してください。 Thismara nke a、ndịnnabata web na-enyekwaụdịatụmatụdụiche iche yanaatụmatụWordPress nkeakọwapụtaradịkaplugins optimizer。 AtụmatụWordPress jisiribụnhọrọdịmma makandịna-achọnduzi a na-eduzi。 Enwereụfọdụndịọbịana-enwekwandịọkachamaraWordPressdịkandịọrụnkwado.
ステージング、WP-CLI、A2カチャサ-ngwa mgbakwunyepụrụiche makaarụmọrụkachasịmma
BochumWeebụkacha mma makandịedemede：GreenGeeks、Hostinger、TMD Bochum
Ihe Nlereanya-BochumekerịtaBochum na-ebidonaanị$ 0.80 / mo-Zuruokèmakandịnweere onwe hach​​ọrọwebsaịtịdịmfe.
Makandịedemede、ịhọrọonye web webna-azọpụtaogebụihekachasịmkpa。 Onye na-ewusaịtịdịmfe（itinyesaịtịna idozi ya ngwa ngwa）、ウェブメール（kagịnandịahịanandịmbipụtaweekwurịtaokwu）、naọnụahịaọnụala（isiahịaụhachaịọọị） chọrọ.
CompanyEfu ^NrụpụtaIhe MfeDịMfeWebmail
$ 3.99 /ナイフ
$ 3.95 /ナイフ
$ 2.95 /ナイフ
$ 3.92 /ナイフ
$ 29.00 /ナイフ
$ 25.00 /ナイフ
Mara-Ndebanye aha maka nnabatawebsaịtịotu.
Kachasịmma maka ogologo oge：A2ボーフム、InterServer
Ihe Nlereanya-InterServeranaghịebidoọnụahịaha n’oge mmeghari ohuru.
Ndịnwe ebenrụọrụweebụmaara na itinye ego maka mbubụnaanịakụkụnkekegwọha na-efu。 Nke abụn’ihi ihedịiche ichedịkaọnụegonnabata。 Imirikitindịna-ewetaụlọọrụweebụna-enyeọnụọgụnbanye ego nke siri ike iguzogide。 Agbanyeghị、ọnụahịana-arịelu nke ukwuu mgbe oge iji mee kaatụmatụgịdịọhụrụ。 Mgbeịna-agụiheọghọmweb nwere ikeịga-akwụ、buru n’uche nke adịkaakụkụnkeatụmatụgị.
$ 3.99 /ナイフ $ 9.99 /ナイフ オゲイッペ90ネフ
4.00ドル/ナイフ 4.00ドル/ナイフ オゲイッペ30ネフ
$ 3.95 /ナイフ 11.95ドル/ナイフ オゲイッペ30ネフ
$ 5.95 /ナイフ 14.95ドル/ナイフ オゲイッペ30ネフ
2.15ドル/ナイフ 11.95ドル/ナイフ オゲイッペ30ネフ
$ 3.92 /ナイフ 7.99ドル/ナイフ オゲオブラエゴアズ
$ 4.95 /ナイフ 7.95ドル/ナイフ オゲイッペ30ネフ
$ 60.00 /ナイフ $ 60.00 /ナイフ オゲイッペ30ネフ
27.00ドル/ナイフ 27.00ドル/ナイフ オゲイッペ100ネフ
$ 29.00 /ナイフ $ 29.00 /ナイフ オゲイッペ30ネフ
Mara-Ah daa dabere naafọ2 ndenye aha.
BochumWeebụsaịtịkachasịmma nkeonwe：GreenGeeks、Hostinger、TMD Bochum
Dịkaọbịamakandịedemede、nnabatawebsaịtịnkeonwekwesịrịịbụnkedịọnụala madịkwamfe iji。 N’agbanyeghịmaọbụibipụtaCVgịmaọbụkwalite “njirimara nke akagị”-Onye na-ewusaịtịdịmfe、njirimara webmail wuru naọnụahịadịọnụalabụihekachasịmkpa na onye na.
Makandịna-eletanaanịotuweebụsaịtị、Hostinger na-enye ihekachasịdịọnụala（$ 0.80 / mo na ndebanye aha）。 Bochum TMD na GreenGeeks na-enye ihedịụnụma ha nwere ebenrụọrụweebụna-akparaghịókèma na-enye nkwadondịahịadịmma.
Ijighọtaihe na-eme onye web webkasịmma maka otuọnọdụ、ọdịanyịmkpaịtụleNkwụsị.
Latitudebụogentanetịnke sava na-anata ma na-ahaziarịrịọonyeọrụmere.
Were yadịkaụgbọelu-MgbendịọrụBekee ruterewebsaịtịa na Australia、arịrịọya na-esi England-Middle East-Asia-Australia-Asia-Middle East-Englandịlaghachinsonaazụ。 Ogeụgbọelubụlaten nkeweebụsaịtịahụ.
Ọbụrụna a na-akwadoweebụsaịtịahụna England、arịrịọndịahụga-agbaba n’ime Englandnaanị、belata oge njem.
Ijihụotu esi enyocha ihe nandụn’ezie、bụotu iheatụ.
N’afọndịgara aga、saịtịaịna-agụbụnke a na-anakwere na ebe datadịnaアメリカ合衆国。 N’okpuru ebe a、a na-anwaleọsọsaịtịahụsite na ijiọnọdụ10 na-eji Bitcatcha.
Nsonaazụọsọọsọweebụsaịtị（2018）sitere na mpaghara iri.
Site na nseta ihuenyo、ịnwere ikeịhụna oge nzaghachi ihe nkesaahụdịgasịiche site naọnọdụgaa naọnọdụ。 Saịtịa gbaraọsọ（8ms）maka ihe nlere ule na United States ma bukwanunwayọmaka oghere ule na Japan na Australia（367ms na 414 ms）.
Na nsondịna-egegịntịnọnso n’ebe savagịnọ、ọbụobereọrụọbụ.
Latitudebụakụkụụfọdụnkentanetịgịna-ebu ogeサイトnaịbawanyeレイテンシ（ahọrọịnabatandịna-egegịntịnso）、oge itinyeweebụsaịtịgịga-aka nkeọma.
N’aka ozo、oburu n’onye otutu ndi na-ege gi nti di na otu obodo ma obu otu mpaghara、o kachasi nma ma hapu webusaiti ha nso.
Nke a na-akọwaihe kpatara na igbu oge jibụrụihedịmkpa mgbeịna-ahọrọndịọbịaweebụ.
Yabụkedu web host kacha mma makaweebụsaịtịUK?
Onye otu m単なるnyochaレイテンシnaụfọdụụlọọrụnnabata nwereụlọọrụdatadịna UK wee lelee ha dabere naọnụahịa、atụmatụnaレイテンシ。 Nsonazụule ya、SiteGround-ebe enhere ebe ihe nkesa na London di、o so na ndi nnabata a nwere oke oso。 Kinsta、n’aka nkeọzọ、na-arụọrụna sava nke Google Cloud kwadoro na London（nkeegosipụtaranaọsọọsọ）.
PickAWeb エンフィールド 35 MS 104 MS
たねっと帯 リーズ 37 MS 126 MS
HostingUK ロンドン、メイデンヘッド、ノッティンガム 41 MS 272 MS
Ngwa ngwa ngwa グロスター 59 MS 109 MS
tsoHost メイデンヘッド 68 MS 582 MS
EUKỌbịa ウェイクフィールド、メイデンヘッド、ノッティンガム 34 MS 634 MS
12. Nkekachasịmma makaWebụsaịtịマレーシア & シンガポール
My Bochum Akụkọ : Ogbe ndịda 검토